Blog - Ego ole ka ọ na-eri iji wuo ebe nchekwa onwe?
Site na oge akụ na ụba dị mma na nke ọjọọ, ngalaba nchekwa onwe ya egosila na ọ bụ onye na-arụ ọrụ nke ọma.Ọ bụ ya mere ọtụtụ ndị na-etinye ego na-achọ iji nweta akụkụ nke ihe omume ahụ.Iji mee nke a, ị nwere ike zụta ebe nchekwa nke dị adị ma ọ bụ mepụta nke ọhụrụ.
Ọ bụrụ n’ịga n’ụzọ mmepe, otu ajụjụ dị mkpa bụ: Ego ole ka ị ga-achọ?Enweghị azịza dị mfe maka ajụjụ ahụ, n'ihi na ọnụ ahịa nwere ike ịdịgasị iche dabere n'ọtụtụ ihe, dị ka ọnọdụ na ọnụ ọgụgụ nke nchekwa onwe.
N'ozuzu, ị nwere ike ịtụkwasị obi na ebe nchekwa onwe onye na-efu $25 na $70 kwa square ụkwụ iji wuo, dị ka Mako Steel si kwuo, onye ọkachamara ya gụnyere ime ụlọ ígwè maka ụlọ nchekwa onwe ya.
Ogologo ahụ nwere ike ịdị iche iche.Dịka ọmụmaatụ, ọnụ ahịa ígwè nwere ike ịrịgo ma ọ bụ gbadaa n'oge ọ bụla, ma ọ bụ ebe ị na-ewu ụlọ ahụ nwere ike na-enwe ụkọ ọrụ.Ma, n'ezie, ị ga-eche ọnụ ahịa dị elu ihu na mpaghara metro karịa ka ị ga-enwe na obere obodo.
Ịchọta saịtị kwesịrị ekwesị iji wulite ihe onwunwe na-echekwa onwe ya
Mgbe ị na-achọ ịmepụta ebe nchekwa onwe gị, o doro anya na ị ga-ekpebi ebe ị ga-ewu ya.Jikere, ịchọta nnukwu saịtị maka nchekwa nwere ike ịghọ aghụghọ.Ị ga-achọ saịtị maka ọnụahịa ziri ezi, yana mpaghara mpaghara ziri ezi, yana usoro igwe mmadụ kwesịrị ekwesị iji kwado azụmahịa gị.
Ị ga na-achụ nta 2.5 ruo 5 acres iji nabata ụlọ ọrụ ahụ.Usoro isi mkpịsị aka nke Mako Steel bụ na ọnụ ahịa ala kwesịrị ime ihe dịka 25% ruo 30% nke mmefu ego mmepe niile.N'ezie, nke a abụghị ihe a ga-echebara echiche ma ọ bụrụ na ị nwere ihe onwunwe dabara adaba maka ebe nchekwa, ọ bụ ezie na ị ka nwere ike ịgafe usoro dị oke ọnụ, na-ewe oge iji gbanwee ala ahụ.
Ọ bụrụ na ị na-emepe ebe nchekwa obere obere nke mbụ gị, ọ ga-abụ na ị ga-achọ saịtị na mpaghara izugbe gị.Ọ ga-adị mkpa ka ị mụọ usoro ntọala ahịa iji nweta echiche nke ọnụego mgbazinye ị nwere ike ịgba na ụdị ụdị ego ị ga-atụ anya ya.
Na-ekpebi oke ọrụ nchekwa onwe gị
Tupu imechi otu ala, ị ga-achọpụta oke ọrụ mmepe nke nchekwa onwe gị.Ị ga-ewu ụlọ nwere otu akụkọ ma ọ bụ ọtụtụ akụkọ?Kedu nkeji nchekwa onwe nke ụlọ ọrụ a ga-edobe?Gịnị bụ ngụkọta obosara square ị chọrọ ịrụ?
Mako Steel na-ekwu na iwu ụlọ nwere otu akụkọ na-efu $25 ruo $40 kwa square ụkwụ.Ịrụ ụlọ ọrụ ọtụtụ akụkọ na-efu karịa - $42 ruo $70 kwa square ụkwụ.Ọnụọgụ ndị a anaghị agụnye ụgwọ nkwalite ala ma ọ bụ saịtị.
Na-eme atụmatụ mmefu ego ihe owuwu maka azụmahịa nchekwa onwe gị
Nke a bụ ọmụmaatụ etu ọnụ ahịa ụlọ nwere ike isi pụọ.Ị na-ewu ụlọ ọrụ 60,000-square-foot, na mmefu ego ihe owuwu na-ebuli elu ịbụ $40 kwa square ụkwụ.Dabere na ọnụ ọgụgụ ndị ahụ, owuwu ga-efu $2.4 nde.
Ọzọ, ọnọdụ ahụ na-ewepụ ụgwọ nkwalite saịtị.Mmelite saịtị gụnyere ihe dị ka ebe a na-adọba ụgbọala, nhazi ala na akara akara.Otu Parham, onye na-ahụ maka nchekwa nchekwa onwe, onye nrụpụta na onye njikwa, kwuru na ọnụ ahịa mmepe saịtị maka ebe nchekwa na-adịkarị site na $4.25 ruo $8 kwa square ụkwụ.Yabụ, ka anyị kwuo na akụrụngwa gị ruru 60,000 square ụkwụ yana mmepe saịtị na-akwụkwa $6 kwa square ụkwụ.N'okwu a, ọnụahịa mmepe ga-agbakwunye $ 360,000.
Buru n'uche na ụlọ ọrụ na-achịkwa ihu igwe ga-eme ka ọnụ ahịa ihe owuwu dịkwuo elu karịa ka ọ ga-ewu ụlọ nchekwa na-enweghị ihu igwe na-achịkwa onwe ya.Otú ọ dị, onye nwe ụlọ a na-achịkwa ihu igwe n'ozuzu nwere ike ime ọtụtụ ihe ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe niile dị iche na ọnụ ahịa n'ihi na ha nwere ike ịkwụ ụgwọ karịa maka nkeji nwere njikwa ihu igwe.
"Taa, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nhọrọ na-akparaghị ókè n'ichepụta ụlọ nchekwa onwe nke ga-ejikọta na mpaghara ị na-eme atụmatụ iwu.Nkọwapụta ụkpụrụ ụlọ na imecha nwere ike imetụta ọnụ ahịa nke ukwuu, "Mako Steel na-ekwu.
Ịrụ ụlọ ebe nchekwa onwe nke ziri ezi
Investment Real Estate, ụlọ ọrụ na-ere ahịa na-echekwa onwe, na-ekwusi ike na obere anaghị adị mma mgbe niile ma a bịa n'ịrụ ụlọ nchekwa.
N'ezie, obere ihe owuwu ga-enwe ọnụ ahịa ụlọ dị ala karịa nke ka ukwuu.Otú ọ dị, ụlọ ọrụ ahụ na-ekwu na ihe owuwu na-erughị 40,000 square ụkwụ anaghị adị ọnụ ahịa dị ka ụlọ ọrụ na-atụ mita 50,000 ma ọ bụ karịa.
Gịnị kpatara?N'akụkụ buru ibu, ọ bụ n'ihi na ntinye ego na-alọghachi maka obere ihe owuwu na-adakarị obere ego nkwụghachi ụgwọ maka nnukwu ụlọ ọrụ ahụ.
Ịnye ego maka ọrụ mmepe nchekwa onwe gị
Ọ gwụla ma ị nwere oke ego, ị ga-achọ atụmatụ iji kwado nkwekọrịta mmepe nchekwa onwe gị.Ịchekwa ọrụ ụgwọ maka ọrụ nchekwa onwe gị na-adịkarị mfe site na ndekọ ndekọ na azụmahịa, mana ọ gaghị ekwe omume ma ọ bụrụ na i meghị ya.
Onye ndụmọdụ isi obodo nwere ọkachamara na ụlọ ọrụ nchekwa onwe ya nwere ike inye aka.Ọtụtụ ndị na-agbazinye ego na-enye ego maka iwu ọhụrụ nke ụlọ nchekwa onwe gụnyere ụlọ akụ azụmahịa na ụlọ ọrụ ndụ.
Ugbu a gịnị?
Ozugbo arụchara ụlọ ọrụ gị wee nweta akwụkwọ ikike obibi, ị dịla njikere imepe maka azụmaahịa.Tupu emechaa ụlọ ọrụ gị, ị ga-achọ atụmatụ azụmaahịa maka ọrụ nchekwa onwe gị.Ị nwere ike họrọ ijikwa ụlọ ọrụ ahụ n'onwe gị.
Ị nwekwara ike ịchọrọ ịkpọ onye njikwa nke atọ ka ọ rụọ ọrụ gị.Ozugbo azụmahịa nchekwa ọhụrụ gị malitere ịmalite siri ike, ị ga-adị njikere itinye uche na ọrụ mmepe nchekwa onwe gị ọzọ!
Ọnụ ụzọ ebe nchekwa 16x7, Ọnụ ụzọ 16'x8' Garage, Mkpọchi diski maka nkeji nchekwa, 8'x7' Ọnụ ụzọ ebe nchekwa, Ọnụ ụzọ ebe nchekwa 10x8, 8'x8' Ọnụ ụzọ ebe nchekwa,